Xiaomi Mi Note 10 oo aan daboolneyn: Naqshadeynta iyo astaamaha | Androidsis
Xiaomi Mi Note 10 ayaa sare u dhigeysa: batteriga aan la dabooli karin, shaashadda waxyaabo lala yaabo iyo waxyaabo kale oo badan
Shalay, waxaan ogaanay waxa ku saabsan jiritaanka taleefan cusub oo Xiaomi ah. Waana taas, shirkadda fadhigeedu yahay Beijing waxay muujisay boodhadh si cad u caddaynaya jiritaanka El Xiaomi Mi Note 10. Hagaag, runtii waa sir qarsoon in Mi CC9 Pro yahay, laakiin waa inaan sugno si aan u xaqiijino. In kabadan hadda oo ay soo martay TENNA, halkaas oo aan awoodnay inaan ku aragno qaabkeeda si faahfaahsan, marka lagu daro qayb ka mid ah astaamaha farsamada.
Waana taas, wakaaladda shahaadeynta Shiinaha ayaa ka tagtay dhammaan sirta Xiaomi Mi Note 10 soo bandhigtay, oo muujineysa qaabkeedii ugu dambeeyay, marka lagu daro qeyb weyn oo ka mid ah astaamaha farsamada. Waxaan horeyba u rajeyneynaa in faahfaahinta qaar ay kaa yaabin doonto.
Tani waxay noqon doontaa El Xiaomi Mi Note 10: shaashad qaloocan iyo waxyaabo kaloo badan
Sida aad ku arki karto sawirka hogaaminaya xariiqyadan, Xiaomi Mi Note 10 wuxuu ku leeyahay faahfaahin aad u xiiso badan xagga hore: guddi qaloocsan oo laba laaban. Taleefanka ayaa la filayaa inuu yeesho a 6.47-inch shaashadda OLED iyo xalka Full HD +, sidaa darteed khibradaha warbaahinta badan waxay noqon doontaa heer sare. Tan tan, ku dar heerka dhibicda biyaha si aad u jabiso sharraxaadda guddiga sida ugu yar ee suurtogalka ah, waxaanan leenahay qalab ku habboon daawashada filimada iyo taxanaha. Kuma filna adiga? Ogow inay sidoo kale yeelan doonto qiime cusbooneysiin ah 90 Hz.
Iyada oo cabirkeedu yahay 157.8 × 74.2 × 9.67 mm, waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in Xiaomi cusub ee loo yaqaan 'Mi Note 10' uu yeelan doono wax soo saar 3.5 mm ah, faahfaahin aan ku qanacsanahay Heerka qalabka, marka lagu daro kor u qaadista shaashadda weyn ee OLED ee aan horay u soo sheegnay, waxaad dhahdaa waxay ku imaan doontaa noocyo kala duwan oo ah 6 GB, 8GB iyo ilaa 12 GB oo RAM ah, oo leh noocyo kala ah 64 GB, 128 GB iyo 256 GB ee keydinta gudaha. Dhamaan waxaa ku shaqeeya processor Qualcomm Snapdragon 730, sidaa darteed waan ku raaxeysan karnaa ciyaar kasta ama codsi kasta oo dhibaato la'aan.
Iyo 0jo, in the Xiaomi Mi Note batari 10 waxay lahaan doontaa 5.170 Mah, taas oo cadeyneysa in ismaamulka aaladan uu noqon doono mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan. Hadda, waa inaan sugnaa ilaa Nofeembar 5, taariikhda la soo bandhigi doono, si aan u aragno waxa soo-saaraha Shiinaha naga yaabiyey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Note 10 ayaa sare u dhigeysa: batteriga aan la dabooli karin, shaashadda waxyaabo lala yaabo iyo waxyaabo kale oo badan
Samsung Galaxy XCover FieldPro, oo ah taleefan casri ah oo dhammaan dhulku wada maamuli karo!
La shaandheeyey sawirka ugu horeeya ee Xiaomi smartwatch